[Sawiro & Magacyo] Rag Xamar loogu xiray iney Jaajuusiin u ahaayeen Sudan iyo Emirate-ka oo la sii daayay
Friday September 09, 2016 - 00:56:04 in Articles by Super Admin
(Rating 4.6/5 Stars) Total Votes: 8
Waagacusub.net - Xabsiga dhexe ayaa laga sii daayay shan nin oo lagu eedeeyay iney Dowladaha Carabta u jaajuusayeen arrimaha Somalia iyo habka ay u shaqeeyso Hay'adda Sirdoonka Qaranka Somalia ee NISA.
Waagacusub.net - Xabsiga dhexe ayaa laga sii daayay shan nin oo lagu eedeeyay iney Dowladaha Carabta u jaajuusayeen arrimaha Somalia iyo habka ay u shaqeeyso Hay'adda Sirdoonka Qaranka Somalia ee NISA. Shanta nin oo Xamar ku lahaay Xarunta Machad-ka Daraasaadka Muqdisho ayaa laga qabtay xafiiskooda iyagoo godka jilicoow ku xirnaay 45 maalmood.
Ragga la xiray ee Jaajuusnimadda lagu eedeeyay ayaa kala ah:
1- Cabdiwahab Cali Muumin. Maamule
2-Shaafici Cabdi Casiis Xaaji Dhafe ,Maamule ku xigeen
3-Cabdiraxmaan Cabdi oo ahaay shaqaale heeysta dhalashadda Holland.
4-Maxamed Saciid Mire oo ahaay shaqaale.
5- Maxamed Cali oo ahaay shaqaale.
Sikastaba ha ahaatee waa la sii daayay shanta nin iyadoon Maxkamad la saarin.